रविको अनुसन्धान र केहि प्रश्नहरु - Netizen Nepal
in विचार, विश्लेषण
संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका छन् “समाचारपत्र मात्र पढ्ने मानिस भन्दा केहि पनि नपढ्ने मानिस बढि शिक्षित हुन्छ” । उनको विचारमा यदि कसैले अरु केहि पनि नढेर वा नसुनिकन केवल संचार माध्यममा आएका विषयवस्तुका आधारमा मात्र आफ्नो धारणा बनाउँछ भने त्यो अन्जानको र अपूर्ण विचार हुन सक्छ । हुन त अठारौ सताब्दीको पश्चिमा मिडियालाई आधार मानी बनाइएको भनाई एक्काइसौं सताब्दीमा , त्यो पनि नेपालमा नमिल्न सक्ला । तर कतिपय बैदिक कालका भनाईहरु अहिले पनि विश्वकै लागि मननयोग्य र ग्रहणयोग्य भएको मान्दा जेफर्सनको भनाई अहिले पनि सान्दर्भिक नै होला ।
लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार जस्ता मौलिक र आधारभूत अधिकार तथा मूल्यहरुको केहि विश्व मानक समेत स्थापित गरेका जेफर्सनले मिडियालाई कम आकलन गरेर यो भनाइ अघि सारेका होइनन् । बरु हाम्रो विश्व मानव समाज र ज्ञानको क्षेत्र यति फराकिलो छ कि संचार क्षेत्र एक्लैले यसलाई समेट्न सक्दैन , त्यसैले सबै कुराको लागि यसमा मात्र भर नपरौं भन्ने अर्थमा यसो भनेका हुनसक्छन् ।
पछिल्लो समयमा केहि विषयमा संचार माध्यमलाई मात्र आधार बनाएर आफ्नो विचार निर्माण गर्ने र त्यसैलाई सत्य ठान्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ । एक किसिमले भन्दा मिडियाका लागि यो राम्रो र सुखद पक्ष हो किनकि यसले मिडिया प्रति मानिसहरुको आशा र विश्वास बढेर गएको संकेत हुन सक्छ ।
अर्को तर्फ जेफर्सनले भनेको कुरा सत्य मान्ने हो भने मिडियाले समाजलाई जुन शिक्षा दिएर मानिसहरु त्यसैको आधारमा धारणा बनाइरहेका छन्, त्यो शिक्षा सार्थक नहुन सक्छ । त्यसलाई मिडियाले सार्थक बनाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ ।
साउन २० गते भएको पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्म हत्याको छानविनका लागि साउन ३० गते प्रहरीले टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने सहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लियो । उनिहरुलाई साउन ३१ गते चितवन जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरियो र अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । शुरुको पाँच दिन गुजरिएपछि भदौ ३ गते थप अनुसन्धानका फेरी पाँच दिन थपिदिएको छ ।
पछिल्लो समयमा केहि विषयमा संचार माध्यमलाई मात्र आधार बनाएर आफ्नो विचार निर्माण गर्ने र त्यसैलाई सत्य ठान्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ । एक किसिमले भन्दा मिडियाका लागि यो राम्रो र सुखद पक्ष हो किनकि यसले मिडिया प्रति मानिसहरुको आशा र विश्वास बढेर गएको संकेत हुन सक्छ । अर्को तर्फ जेफर्सनले भनेको कुरा सत्य मान्ने हो भने मिडियाले समाजलाई जुन शिक्षा दिएर मानिसहरु त्यसैको आधारमा धारणा बनाइरहेका छन्, त्यो शिक्षा सार्थक नहुन सक्छ । त्यसलाई मिडियाले सार्थक बनाउन धेरै मेहनत गर्नु पर्नेछ ।
मानवीय मूल्य ठूलो कि अन्य ?
यतिखेर शालिकरामको मृत्युले भन्दा रवि पक्राउले बढि भाउ र चर्चा पाएको छ । साममाजिक संजाल देखि समाजका जंजाल र भीडभाडमा विभिन्न तर्क र विचारहरु आइरहेका छन् । ती विचार र तर्कहरु कि त रविको पक्षमा कि त उनको विपक्षमा छन् । विचारक पक्ष यसरी विभाजित देखिन्छन् मानौ उनिहरु यो विषयका लागि देव गण र राक्षस गण नै हुन् । तर मृत्युवरण गरेका शालिकरामको विषयले कुनै महत्व र मूल्य पाएको छैन । उनको विषयमा कोही बोलेका छैनन् र बोल्नेहरु पनि छायाँमा परेका छन् । जबकी मान्छे मर्नुको कारण र कारक मूल विषय बन्नु पर्ने हो यतिखेर ।
मान्छे भएर जन्मिएपछि सबैभन्दा ठूलो उसको जीवन हुन्छ । एउटा अपराधी पनि आजीवन जेल नै किन नबसोस् उसको जिउ– ज्यानको कुनै असुरक्षा भएमा ज्यान बचाउनु राज्यको दायित्व हुन्छ र त्यसै गरिन्छ पनि । एउटा पेशाकर्मीले ज्यान गुमाउँदा हाम्रो संवेदना हराउँनु दुःखद पक्ष हो । हामी विवेकशील मानवले यति कुरा न्यूनतम पनि सोच्नु पर्ने हो । तर शालिकरामको मृत्युको घटनामा समाज अर्कैतिर मोडिएको छ । यसका कारणहरु धेरै होलान् । तर यो प्रवृत्तिले एउटा प्रश्न जन्माएको छ कि हामी कतातिर हिडिरहेका छौ ? अनि यसैमा थप सहायक प्रश्नहरु पनि जोडिएका छन् ।
एउटा व्यक्तिले आत्म हत्या गरेपछि त्यसको कारण र त्यसका दोषी पत्ता लगाउनु पहिलो आवश्यकता हो कि होइन ? यसका लागि राज्यको अधिकार प्राप्त निकायले संभाव्य दोषीको पहिचान गर्नु, उसलाई सोधखोज र अनुसन्धान गर्नु , प्रमाण संकला गर्नु, न्यायालय समक्ष पेश गर्नु र दोषी किटान गरी कानून अनुसार कारवाही गर्नु अनिवार्य प्रक्रिया होइन र ? यो देशका कुनै पनि नागरिकको शालिकरामको जस्तै मृत्यु भएमा राज्यले सबैप्रति गर्नु पर्ने दायित्व यहि होइन र ? यदि त्यसो हो भने राज्यको यो स्वभाविक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई निष्पक्ष छानविनका लागि सघाउँनु र त्यस प्रक्रियामा राज्यका निकायले निष्पक्षताको बाटो बिराएमा खबरदारी गर्नु नागरिकको अधिकार र कर्तव्य पनि हो । तर यस प्रक्रियामा छानविन र अनुसन्धान चलिरहेका बेला आरोपित व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा भीड र झुण्ड बनाएर छानविनलाई प्रभावित गर्न खोज्नु आफैमा कति ठिक कति गलत ?
अहिले सडकमा उत्रिएकाहरुको मुख्य मुद्दा शालिक रामको मृत्युको निष्पक्ष छानविन गरी दोषी पत्ता लगाउँन दबाब दिनु नै होला । यसमा राज्यका निकाय प्रभावित नबनून भन्ने होला । तर हामीले ख्याल गर्नु पर्ने कुरा यो पनि छ कि प्रदर्शनमा उत्रिका रविका समर्थकहरुबाट त्यस्तो सन्देश गएको छैन । रविकै कार्यक्रमका एक पूर्व सहकर्मी मृतकको पक्षमा एक आवाज पनि नआउँदा रविका समर्थकलाई अर्को पक्षले प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहदैन ? अर्को कुरा रविलाई छानविनका लागि राज्यका निकायले नियन्त्रणमा लिदा यत्रो चिन्ता छ भने मृतकका आफन्त र परिवारलाई आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनुको पिडा कति होला ? आखिर हामी कोही पनि अजम्बरी त छैनौं । एक पटक आफू त्यो ठाउँमा उभिएर हेरौं ।
राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास
आत्म हत्याका घटनामा मृतकले छोडेका प्रमाणहरु नै सबैभन्दा पहिलो र बलियो आधार हो । तर ती प्रमाणहरुमा सत्यता र शुद्धता जाँच्नु अनिवार्य हुन्छ । यो सबै कुराको जाँच गरी प्रमाणको शुद्धता संकलन गर्नु र अदालत समक्ष पेश गर्नु प्रहरीको काम हो । अहिले प्रहरी यहि चरणमा छ । यतिखेर रवि लगायत प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका तीनजना व्यक्तिहरु उक्त आत्म हत्याको अनुसन्धानका सहयोगीहरु पात्रहरु हुन् ।
उनिहरु हिरासतमा रहेका बेला केहि भिडले रविप्रति खुच्चिङ गरिहरेका छन् र उनि दोषी सावित भएर जेल नै बसुन् भन्ने अव्यक्त भाव प्रकट गरिरहेका पनि होलान् । केहि व्यक्तिहरु रविलाई यसरी चित्रण गरिरहेका छन् कि मानौ लाखौ मानिसहरु फ्यान भएका कारण उनले कुनै गल्ति गर्न सक्दैनन्, त्यसैले राज्यले उनलाई छुन पनि पाउँदैन । यी दुबै विचारहरु अतिवाद प्रभावित छन् । यसले समाजलाई फाइदा गर्दैन । यो प्रवृति बढ्नुमा कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि मूलरुपमा हाम्रो राज्य संयन्त्र नै दोषी छ ।
विगतका घटनामा राज्यको लाचार र लापरवाहीले गर्दा यस किसिमका संवेदनशील घटनामा राज्य संयन्त्र प्रति नागरिकको विश्वास छैन । त्यसैले आफ्नो आदर्श व्यक्तिलाई अन्याय हुनबाट रोक्नका लागि स्वतःस्फूर्त रुपमा मानिसहरु सडकमा उत्रिएका छन् रविको समर्थनमा । विगतका घटनाहरुमा राज्यले निष्पक्ष र उचित छानविन र अनुसन्धान गर्न नसकेको घटनाले उनिहरुलाई सशंकित बनाएको छ । एक वर्ष अघिको निर्मला हत्या प्रकरण यसको उदाहरण हो ।
राज्यले पनि यस्ता घटनाको अनुसन्धानमा आफूलाई सुधार गरेको विश्वास आम नागरिकलाई दिनु पर्छ । यो घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष ढंगले पत्ता लगाएमा राज्यप्रतिको गुमेको विश्वास केहि हद्सम्म फर्किएको मान्न सकिन्छ । यो कुरा राज्य संयन्त्रले गम्भिर ढंगले बुझ्नु पर्छ । तर सडकमा उत्रिएका रविका सार्थकहरुलाई राज्यले अहिलेसम्म एउटा भिड मात्र देखेको छ, उनिहरुलाई यो घटनाको निष्पक्ष छानविन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक नै ठानेको छैन ।
विधिको शासनलाई बलियो बनाऔं
हामीले देशमा विधिको शासन चाहेको हो । विधिको शासनमा कानून सर्वेसर्वा हुन्छ । त्यसो हो भने कुनै व्यक्तिको मृत्युमा अर्को व्यक्तिको नाम जोडिन्छ भने उसले विगतमा गरेको राम्रो कामसंग सट्टापट्टा गरेर छानविन नै नगरी छाडिदिन सकिदैन । रविको पक्षमा सडकमा उत्रिएका शुभचिन्तकले यहि खाजेको पनि होइन होला । तर अहिले सन्देश यस्तै गएको छ । यस्तो सन्देश प्रवाह हुदा यसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउन मलजल गर्छ । यहि प्रवृत्तिलाई वढावा दिने हो भने भोली कुनै दलको उच्च नेतृत्वलाई राज्य संयन्त्रले अनुसन्धान गर्न नियन्त्रणमा लिदा उनिहरुका झोले झण्डे कार्यर्ताहरु प्रहरी र अदालत घेराउ गर्न जालान् ।
आज रविलाई अनुसन्धान गर्न पाईदैन भन्नेहरुले भोली तिनिहरुलाई गलत भन्न मिल्ला ? यो देशमा कसैले दलको नाममा, कसैले धर्मको नाममा, कसैले पेशाको नाममा केहि झुण्डहरु खडा गर्ने अनि त्यसको अगुवालाई राज्यले चाहेको बेला छानविन सम्म गर्न नदिने त ? अनि झुण्ड नहुनेहरु चाहिं शालिक रामको पक्षमा कोही नबोले जस्तैको अवस्थामा रहनु पर्ने हो ? के यसले कानूनी न्याय, समानता, विधिको शासनलाई सघाउँछ होला ?समाज सुधार र विकृति विरुद्ध उठेको रविको उर्जावान अभियानलाई सडकको यो आवाजले न्याय गर्छ त ? यतातर्फ पनि सोच्ने कि ।
आम नागरिक त्यतिखेर बलिया हुन्छन्, जब राज्यका निकायहरु बलिया हुन्छन् । त्यो भनेको परिपक्व विधिको शासन हो । विधिले काम गर्न थालेमा न्यायका लागि सडकमा जानु पर्दैन । हरेक सडक आन्दोलनले कुनै घटना विशेषको मिसन मात्र राख्नु भन्दा पनि विधि र पद्धती सुधारलाई पनि योगदान गर्न सके त्यो आन्दोलन बढि सार्थक हुन्छ । यहाँभन्दा अघि धेरै राजनीतिक आन्दोलन गर्ने बानी परेका हामी आन्दोलन गर्न डराउदैनौं ।
कतिपय नजायज कर्तुतहरुविरुद्ध आँटका साथ लडेका पनि छौ । कुनै नागरिक माथि अन्याय भयो वा दमन भयो वा छलकपट भयो भने सामूहिक आवाज मात्र होइन बलिदान गरेका घटना पनि धेरै छन् । तर समग्रमा विधिको शासन खोज्ने अनि घटना विशेषमा विधिलाई विर्सने र स्वार्थ प्रेरित तर्क र कर्मले फेरी पनि घाटा नागरिकलाई नै हुने हो । त्यसैले यो सडक आन्दोनले निष्पक्ष छानविन, दोषीको पहिचान र उसलाई दण्ड सजायका लागि दवाब दिनु र निग्रानी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
विचारको बहुलतालाई सम्मान गरौं
एक जना चर्तित फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयर, जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रका सेनानी नै थिए, उनले भनेका छन्, “म तिमिले भन्नु पर्ने कुरासंग सहमत राख्दिन तर तिम्रो बोल्न पाउँने अधिकारलाई मृत्यु अघिसम्म रक्षा गरिरहने छु ।” नेपाली समाज यसरी विभाजित भइरहेको छ कि कतिपय अवस्थामा अर्काको विचारमा असहमत हुनु भनेको ऊ प्रति घृणाभाव राख्नु वा उसलाई शत्रु ठान्नु सरह लिने गरिन्छ ।
हामी यस्तो संस्कृति विकास गर्दै छौं कि फरक मत राख्ने वित्तिकै उसलाई विरोधी वा दुश्मन नै ठान्न थालिसकेका छौ । उदाहरणको लागि यतिखेर रविको पक्षधरता लिएमा उनकोे शुभचिन्तक र तटस्थ वा भिन्न तर्क राखेमा उनको महान शत्रु र विरोधि जस्तो अर्थ लगाइएको छ । हाम्रो यो प्रवृत्तिले एक्काइसौ शताब्दीको विचार र सोचको बहुलतालाई न्याय गर्दैन ।
हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो सिकाएका छन् कि आफ्नो आलोचना गर्ने कोही पनि व्यक्ति महान शत्रु र दुश्मन नै हुन्, त्यस्तालाई तुरुन्त शब्दबाण प्रहार गर्नु पर्छ । आलोचनात्मक विचार सुन्नु पनि हुदैन । रवि लामिछनेको पक्षमा सडमा आएका शुभचिन्तकहरुले शालिनता प्रदर्शन गरेमा भिन्न मत राख्ने प्रति तुरुन्तै झम्टिहाल्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री र संचार मन्त्रीहरुले पनि आलोचनालाई सम्मानजनक ढंगले ग्रहण गर्न सिक्न सक्थे होला कि ।
त्यसैले भ्रष्टाचार, कमिसन, कालाबजारी, ठग र फटाहाहरुका विरुद्ध निडर भएर लड्ने आँटको विम्ब बनाएका रविका शुभचिन्तकहरुले रविकै बारेमा चलेको छानविनलाई सहयोग गर्दा रविको उचाइ झनै बढ्छ होला । तर राजनीतिक दलको भन्दा पनि उग्रता र उच्छृंखलता प्रदर्शन गर्ने हो भने भोलिका दिनमा हामी नागरिकले राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्ने नैतिक बल नहुन सक्छ ।
यतिखेर अनुसन्धान चलिरहेको छ । अनुसन्धानलाई सहयोग गरौं । अनुसन्धानमा कतै चलखेल हुन्छ भने निगरानी र खबरदारी गरौं । यदि अनुसन्धानको क्रममा कहि कतै गडबडी भयो भने त्यो गलत हो । त्यतिखेर सडक तताउँनु उचित होला । त्यो समयमा चितवनमा मात्र होइन देशभरी नै लाखौं मानिसहरु सडकमा उत्रिने छन् । सम्बन्धित् पक्षलाई सुध्रिन वा सजाय भोग्न बाध्य पार्ने छन् ।
यतिखेर जति नै मानिसहरु सडकमा कराए पनि राज्यले छानविन र अनुसन्धान विचैमा छाड्दैन र छाड्नु पनि हुन्न किनकि राज्यका आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । ती प्रक्रिया र पद्धतीलाई कुनै अप्राकृति ढंगले विर्सजन गर्न र अलग्याउन सकिन्न । बरु सडकको आवाजलाई निष्पक्ष छानविनका लागि दवाब श्रृजना गर्ने सन्देशमा रुपान्तरण गरौं । यसो गरेमा रवि लामिछाने मात्र होइन सबै निर्दोषहरु रिहा हुनेछन् दोषीहरुले सजाय भोग्नेछन् र मृतकले न्याय पाउँनेछन् ।
Tags: Om Prakash GhimireRabi LamichhaaneResearch on Rabi Lamichhane